Funda ukongeza amanani angaphezulu kwamabini Discover Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Udibaniso olumelwe luphawu +, kunye nokuthabatha (-), ukuphinda-phinda (x), kunye nokwahlula (/), yinxalenye yeqela lemisebenzi esisiseko yealgebra. Kule tekisi, siza kujongana kuphela nokudibanisa kwaye siqonde indlela yokuyisebenzisa ngendlela elula. Eli candelo lemathematika lisoloko likho kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye ngamanye amaxesha asiliboni.
Umzekelo, xa sifuna ukwazi ukuba imali yethu iya kwanela ukuthenga izinto ezithile, okanye ukongeza iminyaka yoogxa bethu, inani labafundi esikolweni, njl.
1 Iipropathi zokongeza
2 Inani elingaphezulu kwamanani amabini.
2.2 Ukusombulula ingxaki encinci
2.3 Isiphelo sengxaki encinci.
Okokuqala, kufuneka siqonde ezinye zeempawu ezikhoyo kwisambuku. Oku kuyakwenza ukuba kube lula ukuqonda ubalo lwexa elizayo.
Ukudibana: Eli gama likhulu kwaye mhlawumbi lingaziwa kwezinye lithetha ukuba ukulandelelana kwamanani akutshintshi iziphumo zobalo. Umzekelo, 1 + 2 = 3, ngendlela efanayo no-2 + 1 = 3. Nokuba kutshintsha indawo 1 no-2, isiphumo besifana. Ngaphandle koku, kuyathakazelisa ukubeka elona nani likhulu ngaphambili, kuba kuyanceda ukusombulula iziphumo ngokukhawuleza;
Into engathath'icala: Eli gama libhekisa kwinani 0 (zero). Oku kukuchaza ukuba eli candelo alitshintshi iziphumo zabanye. Ke, kanye njengokuba 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 0 = 3. Oko kukuthi, u-0 akatshintshi ukubala kwam, ayisebenzi okanye ayithathi cala;
Ukuvalwa: Le propati ithi inani elipheleleyo lamanani liyakuhlala liyinani lokwenyani. Kumzekelo 1 + 2 = 3, zombini 1, 2, kunye no-3 ngamanani okwenyani.
Inani elingaphezulu kwamanani amabini.
Kwakhona, kunokwenzeka ukuba ungeze ngaphezu kwamanani amabini kwiakhawunti enye. Kwaye nangona kubonakala kunzima, ukubala kulula kakhulu, kuba kwenzeka ngendlela efanayo neegrafu ezimbini kuphela.
- Isikolo sikaLucas sikhulisa imali yomnikelo kwizinja ezilahliweyo. Injongo yesikolo kukufikelela kuma-reais angama-500, ke abafundi baya kufuna uncedo kurhwebo. Abafundi baya kwiivenkile ezintlanu. Ivenkile A inike ama-55 reais; B wanikela nge-149 reais; C wanika 78 reais; D wanika 50 reais; okokugqibela ku-E, onikele ngeerali ezili-168. Ke, ukongeza amaxabiso evenkile, ngaba abafundi bafumene ixabiso lilonke?
Ukusombulula ingxaki encinci
Okokuqala, masihlukanise amaxabiso esiza kuwadibanisa, Oko kukuthi, amaxabiso anikwe Ivenkile nganye:
Unokongeza ngokuthe ngqo, kodwa khumbula ukuba amanani amakhulu aphezulu, ukubala kulula kakhulu. Emva koko siza kuyibeka ngokulandelelana, ukusuka kwelona liphezulu ukuya kwelona liphantsi. Nje ukuba kwenziwe, qalisa ukongeza iiyunithi, emva koko amashumi kwaye ekugqibeleni amakhulu (ukusuka ekunene ukuya ekhohlo):
Iiyunithi: 8 + 9 + 8 + 5 + 0 = 30 (Shiya iqanda elingezantsi uze uphakamise isi-3 ngaphezulu kwendawo yeshumi.)
Amaninzi: 6 + 4 + 7 + 5 + 5 = 27 + 3 = 30 (Eli nani lokugqibela lingu-3 lingaphezulu kweshumi, lishiya u-0 ngezantsi lize lenyuke ngo-3)
Amakhulu: 1 + 1 = 2 + 3 = 5 5 (Inombolo yokugqibela 3 ingaphezulu kwamakhulu)
Isiphelo sengxaki encinci.
Iziphumo zesidibaniso seevenkile ezintlanu zazingama-500 reais, oko kuthetha ukuba injongo yesikolo yafikelelwa.